Ampiasao ny tontolon'ny virtoaly 8 Studio Ghibli amin'ny antso an-tsary Zoom | Famoronana an-tserasera
Studio Ghibli mizara sary 8 an'ny sarimihetsika ho an'ny fiainanao virtoaly ao amin'ny Zoom
Manuel Ramirez | | General, maro
Zoom dia nanjary fironana noho ny toetrany, ary izany dia Studio Ghibli ilay iray izay maniry anao hampiasa ny sariny sasany ankehitriny izay navoakany tao amin'ny tranonkalany ho tahiry virtoaly.
Tsy vitsy ny orinasa manatevin-daharana an'ity fandraisana andraikitra ity mahafantatra ny fomba Ny fampiasana antso an-tsary dia nitombo be amin'izao andron'ny COVID-19 izao. Ka andao handeha miaraka amin'ireo sary tsara tarehy ireo ho an'ny haingo tsara indrindra amin'ny antso an-tsarinao.
Zanaka Sary 8 avy amin'ny Studio Ghibli azonao sintonina avy amin'ity rohy ity: Fiorenana virtoaly an'ny Studio Ghibi ho an'ny Zoom
Anisan'ireny ny sarimihetsika misy ny angano toy ny Princess Mononoke, Spirited Away na Nausica. Sarin'ireo sary mihetsiketsika be dia be ireo ary ho fantatrao haingana ireo mpanaraka ny Studio Ghibli ekena eran-tany noho ny sarimihetsika mahafinaritra sy mahafinaritra misy sary mihetsika; raha ny marina dia imbetsaka izy ireo no niseho tamin'ireto tsipika ireto toa an'i Miyazaki lasa esory ny hevitrao momba ny sarimiaina AI.
Mifandraika amin'ny Zoom, dia ilay Serivisy fiantsoana horonantsary be mpampiasa indrindra amin'izao fotoana izao noho ny antony maro. Ny iray amin'izy ireo dia ny fanamorana ny fidiran'ny tsirairay amin'ny kaonferansa antso an-tsary sy ny kalitao am-peo sy horonantsary mahafinaritra. Azonao atao ihany koa ny mampiasa tahiry virtoaly dia manome azy ny zavatra ary afaka fotoana fohy hampiakarana haingana ny isan'ny mpampiasa mampiasa ny serivisy isam-bolana.
Na dia manana olana aza mifandraika amin'ny fiainana manokana, Zoom koa dia mamela anao hizara ny birao misy anao ary hifehy feno amin'ny antso an-tsary. Ary izao dia azonao ampiasaina ireo sary 8 Studio Ghibli ireo amin'ny antso an-tsarinao hampifaly azy ireo kokoa.
Mampiasa ny haitaonany manokana izy ireo hanoloana ny fototra. Ary raha efa manana a tontonana maitso ho an'ny background, mandeha tsara kokoa aza. Azonao atao ny manandrana lamba maitso raha manana izany ianao, na dia tsy misy azy io aza dia mahomby koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Studio Ghibli mizara sary 8 an'ny sarimihetsika ho an'ny fiainanao virtoaly ao amin'ny Zoom